Shiineeska Birta Aan Lahayn Afuufta Iyada oo loo marayo Rotary Feeder Valve saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Zili
Birta Aan-Laawaha Ahayn ee lagu afuufo Valve Rotary Feeder
Magaca Alaabta: Afuufta Birta Aan-Aabaha lahayn ee Hawada Rotary Valve
Isticmaalka: Nidaamka gudbinta pneumatic cadaadiska togan
Qalabka: Birta aan la taaban karin 304 iyo 316 waa la heli karaa
Goobta lagu dabaqi karo: cunto, quudin, macdanta, warshadaha kiimikada ama beerta
Qalabka lagu dabaqi karo: budo, qaybo, walxo jabay, iwm.
Shaqada: Qaadashada, ku shubista agabka gudbinta pneumatic iyo hubinta xasiloonida cadaadiska nidaamka shabakadaha hawada
· Tilmaamaha waxqabadka: arc iyada oo loo marayo nooca, NJ nooca la kala saari karo, qaab-dhismeedka hawo-wareegaya, rotor-socodka hagaya, ka fogaanshaha xagal dhintay ee kanaalka socodka, yaraynta caabbinta dheecaanka, iyo kordhinta dheecaanka
· Lambarka shatiga: 201420033836.7
ZILI birta aan la taaban karin waxay ku garaacday valve rotary airlock, qaadashada naqshad toos ah iyo naqshad cadaadis aan toos ahayn, iska caabbinta dabayshu waa yar tahay, waxayna ku habboon tahay alaabta leh isku-dhafka weyn ee isku-dhafka. Foomka xirida waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo deegaanka isticmaalka isticmaaluhu. Rotor-ka U-qaabeeya ayaa la qaatay, maaddaduna ma fududa in lagu shubo rotor-ka.
Alaabooyinka rotary-ga ah ee lagu garaaco ma laha flange ka soo baxa dhinaca hoose sida dhibicda. Qeybta hoose ee daloolka guryuhu waa siman yahay ama waxay leedahay barkad, taas oo ah halka khadka gudbinta pneumatic uu isku xiro oo uu maro hoosta waalka. Maaddadu waxay u quudisaa meesha laga soo galo sida meel la soo mariyo, laakiin marka rotor-ku u gudbiyo walxaha dhinaca hoose ee waalka waxa “afuufa” si toos ah uga soo baxaysa jeebabka rotor-ka oo gelaya xariiqda gudbinta ee dhinaca hoose.
Birta aan-Aahma lahayn ee lagu afuufo valves-ku waa heerka cunto ee ku habboon budo isku xidhan ama dhegdheg leh sida kookaha, burka, ama budada caanaha. Budadani waxa laga yaabaa inay is-qabsadaan oo ay ku dhegaan gudaha meeraha rotor-ka. Waalka wareega ee jug-jug-gudbiyeedka, dareeraha waxaa lagu hagaajiyaa iyada oo budada sida fudud isku duubni laga soo saarayo jeebabka rotor-ka, taas oo ka caawisa in rotor-ku uu ka nadiifiyo dhismaha. Faa'iidada kale ee garaaca-mareennada rotary-ga waa muuqaalkooda hoose. Marka la barbar dhigo waalka hoos u dhaca ee cabbirka la mid ah, xariiqda gudbinta hababka dharbaaxadu waxay aad ugu dhowdahay khadka dhexe ee u oggolaanaya inay qaadato dherer aad u yar. Tani waxay ka dhigaysa dharbaaxo la marsiinayo valves rotary doorasho wanaagsan oo loogu talagalay rakibaadda nadiifinta hoose ee meesha hoos u dhigista laga yaabo inaysan ku habboonayn.
S: Waa maxay wakhtigaaga wax soo saarka iyo dhalmada?
J: Waxay kuxirantahay nooca badeecada aad u baahan tahay iyo tirada, sida caadiga ah noocayada caadiga ah, ee ka hooseeya 10 qaybood, alaabtu waxay diyaar noqon kartaa ilaa 20 maalmood. Alaabooyinka la habeeyey, wakhtiga keenista waxa uu ahaan doonaa ilaa 40 maalmood.
S: Waxaan leenahay mashruuc u baahan nidaamka pneumatic, shirkadda aad samayn kartaa design iyo qaybaha kale ee nidaamka?
J: Haa, taasi waa inoo diyaar. Waxaan leenahay 20 sano oo waayo-aragnimo ah waalka rotary-ga iyo warshadaha waalka leexiyaha ee laba-jidka ah. Aad u yaqaan gudbinta pneumatic. Waxa kale oo jira shirkado badan oo nagala shaqeeya si ay macaamiisha u siiyaan tas-hiilaadyo kale oo taageera. Si kale haddii loo dhigo, macaamiishu waxay u baahan yihiin oo kaliya inay ku siiyaan dalabaadkooda, waxaanan ku siin karnaa xalal naqshadeed si aan u samayno dhammaan tas-hiilaadka taageeraya sida tuubooyinka, xididada afuufaya, iyo kuwa boodhka ururiya marka laga reebo valves rotary.
S: Ma liis gareyn kartaa qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda ee aad la shaqeyso?
J: Haa, waanu si fiican u naqaannaa shirkadaha hawada ka xidha ee gudaha iyo kuwa laba-geesoodka ah. Shirkadaha aan la shaqayno waxay faa'iido u leeyihiin Yi Kerry, COFCO iyo wixii la mid ah.
S: Ka waran adeeggaga iibka kadib?
A: Waxaan bixinaa dammaanad hal sano ah, Haddii ay jirto guuldarro inta lagu jiro muddada dammaanadda, waxaan u diri doonnaa agabyada cilladaysan lacag la'aan waxaanan hagi doonnaa macaamiisha inay ku rakibaan khadka tooska ah. Haddii ciladdu ay halis tahay, waxaan bedeli karnaa qalabka cusub.
Hore: Duulimaadyada Wareega ee Soo Gelida & Qufulka Hawada Wareega ee Rotary
Xiga: Qaadista Cadaadis Xun Isticmaalka Rotary Airlock Valve
ku afuufo waalka rotary
cadaadis togan oo gudbinaya waalka hawada
bir aan lahayn hawo xidhid
valve dheecaanka xiddiga
Waalka weecinta ee Pneumatic Power 2 Way
Cadaadis Wanaagsan oo Gudbinaya Qorshaha Dhabarka ah ee dhabarka...
3-Way weeciye Valve, Xakamaynta Elektarooniga ah, 3 Way Ball Valve, quudiyaha rotary, valve rotary, hawo xidhid,